Iimfumba zamaphepha esinyithi abavelisi - China izixhobo zentsimbi ezinamathelayo ababoneleli kunye nefektri
Ingqele Yenziwe nge-OZ Combi Walls Steel Sheet Pile
Ingqele equlunqwe OZ uhlobo sheet yentsimbi yimfumba uhlobo ssaw umbhobho kunye nohlobo z uhlobo sheet yentsimbi combi iindonga combi. Inkqubo yentsimbi ebunjiweyo yentsimbi 'yile: i-billet yentsimbi iyashushu kwaye iqengqelwe ngohlobo olufanayo njengemfumba eshisayo eshushu, kodwa endaweni yokubumba iflethi, u-U okanye u-Z wecandelo lemfumba ngelixa kushushu, iikhoyili zishiyiwe ukupholisa. Iikhoyili ezishushu ziqengqeleka emva koko zijikeleze ilitye lokusila zize zimiliswe kubushushu begumbi ukuya kwimfumba yokugqibela yeZ yemilo yentsimbi.
Hot zaziqengqa iimfumba sheet zentsimbi
Iifolthi zentsimbi ezityikityiweyo ezishushu ezishushu zihanjiswa ngokulinganayo kumacala omabini e-axis engathathi hlangothi, kwaye iiwebhu ziyaqhubeka. Inkqubo eshushu iqengqiwe z zeshiti yentsimbi yile: Ishushu intsimbi eqengqeleweyo icinezelwe kumaqondo obushushu angaphezu kwe-1,700F, nto leyo eyenza kube lula ukumila nefom. Nantsi inkangeleko yenkqubo yokuveliswa kwemfumba yentsimbi eshushu eshushu: 1. Umqadi omkhulu oxande, obizwa ngokuba yibillet, uyatshiswa kwaye ucwecwe ube ngumqolo omkhulu 2. Uluhlu lwentsimbi luqhutywa ngothotho lweeroli, nangoku amaqondo obushushu aphezulu kakhulu, ukufezekisa ubukhulu kunye nemilo oyifunayo.
Ingqele Egqityiweyo Yensimbi Sheet Pile yeProjekthi
Ingqele ebunjiweyo yenkqubo yentsimbi yohlobo lwepiles yileyo: i-billet yentsimbi iyafudunyezwa kwaye iqengqelwe ngohlobo olufanayo njengemfumba eshisayo eshushu, kodwa endaweni yokumiliselwa kumacandelo e-U sheet ngelixa kushushu, iikhoyili zishiywa zipholile. Iikhoyili ezishushu ziqengqeleka zigqitywe kwilitye kwaye zibunjwe kubushushu begumbi ukuya kubume bokugqibela be-U.
Ingqele Equlunqwe iZ Steel Sheet Pile Yokwakha
Ingqele eyenziwe ngohlobo lwenkqubo yentsimbi yentsimbi 'yile: i-billet yentsimbi iyashushu kwaye iqengqelwe ngendlela efanayo ne-sheet ejijwayo eshushu, kodwa endaweni yokumiswa kumacwecwe e-flat, U, okanye e-Z ngelixa kushushu, iikhoyili zishiywe zipholile. Iikhoyili ezishushu ziqengqeleka zigqitywe kwilitye kwaye zibunjwe kubushushu begumbi ukuya kubume bokugqibela beZ.
I-SY295 eshushu isongelwe u-Sheet Sheet Pile Yokwakha
Hot esongwe U uhlobo sheet yentsimbi yimfumba sheet yentsimbi eveliswa yi kaloliwe eshushu ngokusebenzisa iwelding. Ngenxa yetekhnoloji ethe xhaxhe, ukuluma kwayo kunamanzi aqinileyo.
Inkqubo efumanekayo eshushu yentsimbi yohlobo lwentsimbi yile: Isinyithi eshushu esishushu sicinezelwe kumaqondo obushushu angaphezu kwe-1,700F, nto leyo eyenza kube lula ukubumba nokwenza ifom. 1) Umqadi omkhulu oxande, obizwa ngokuba yibillet, uyatshiswa kwaye ucwecwe ube ngumqulu omkhulu; I-2) Uluhlu lwentsimbi luqhutywa ngothotho lwee roller, nangoku kumaqondo obushushu aphezulu kakhulu, ukufezekisa ubungakanani kunye nemilo oyifunayo.